Machine Kudzidzira Kufanotaura 2021-2022: Iko ML Kunotungamirwa Inotevera Hupamhi - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kurudziro yakasarudzika yakagamuchirwa kubva kuYouTube neNetflix, Smart Home Rubatsiro, Izwi Kuzivikanwa, Kukurukurirana chatbots, nezvimwe, ndiyo mienzaniso mikuru ye Machine Learning technology. Kudzidza kwemuchina ndiyo yepasi-bazi reArtificial Intelligence uye imwe yehunyanzvi hwakakura mukuzivikanwa nenguva. Kunyangwe iwe wakabatana neiyo IT indasitiri kana kwete, kudzidza kwemuchina uye huchenjeri hwekunyepedzera haasisiri mazwi ebuzz.
Kudzidza kwemuchina kwagara kuri imwe yemisoro yenyowani muindasitiri yetekinoroji. Parizvino, hombe data, otomatiki mota, uye NLP iri kutonga iyo makambani, uye kukosha kwazvo kwakakwira mu2021, uye isu tiri kutarisira zvakawanda kwazvo mumakore anotevera.
Machine yekudzidza tekinoroji uye ayo algorithms vakatowana nzvimbo yavo kwese kwese, kubva eCommerce kusvika nezveutano to digito chikwama kune indasitiri yekutengesa kune smart home rubatsiro; muchina kudzidza uri kwese kwese sezvo uchibata mukana wekuuya nekucheka-kumucheto tekinoroji mhinduro dzemasangano.
Kunyangwe imwe ye Forbes tsvagiridzo yakaratidza kuti musika wepasi rese wekudzidza wemuchina waizokwira kusvika pamadhora anodarika mabhiriyoni makumi matatu nemazana makumi maviri nemakumi maviri nemakumi maviri. Tichifunga nezvehuwandu uhu, tauya nemaitiro anozotonga musika wekudzidza wemuchina muna 30.6 nekupfuura.
Emerging Machine Kudzidza Maitiro Ekutarisa Kunze muna 2021
Masangano ari kuenda padhijitari kuitira kuti vaunze mari yakawanda uye vatengi kumusika uyu wakanyanya kugadzikana. Izwi rekuti "data" isimba idzva, uye mabrands pasirese ari kuyedza kusefa nekurongedza dhata kuti riwane ruzivo rwevashandisi. Kunyangwe icho chiratidzo chiri:
Kana masangano ehurumende
Maindasitiri akasiyana ari kuyedza tekinoroji yekudzidza muchina. Saka ngatione zvimwe zvinotevera ML maitiro anogona kuchinja ramangwana. Pano isu takapfupikisa epamusoro michina yekudzidzira maitiro akagovaniswa nenyanzvi dzeindasitiri.
Zvoga Machine Kudzidza
Automation yemuchina kudzidza (AutoML) iri kubuda senzvimbo nyowani inogona kushandiswa kune ese ekutsvagisa uye mabhizinesi ekushandisa sezvo iine mukana wekurerutsa maitiro, kudzikisa nguva inodiwa kugadzira modhi, pamwe nekuvandudza mashandiro.
Kudzidza kwemuchina kunogona kushandiswa kumatambudziko chaiwo-epasi munzira dzakasiyana siyana - kubva pakuwana dhata kusvika pakuongorora fungidziro dzemhando. Zviri pachena kuti zvinokwanisika kugadzirisa matanho ese uku uchipawo yakanyatsogadziriswa modhi uye yakagadzirirwa kufungidzira. AutoML inovavarira kugadzirisa maitiro ekupedzisira-kumagumo.
Kudzidzira muchina kudzidza zvakare kunobatsira mukushandisa muchina kudzidza maturusi akanyanya nemaitiro anochengetedza nguva nezviwanikwa. Pano unogona kufunga nezve muenzaniso we Microsoft Azure izvo zvinokubatsira iwe kuvaka uye kuendesa fungidziro mamodheru nekukurumidza.
Hyper Automation uye Machine Kudzidza
Hyper Automation ndiyo tekinoroji iri kubuda yakaunzwa ne Gartner uko marangi nemasangano anozokurumidza kuona nekushandura mabasa akaoma ebhizinesi. Gartner anotarisirawo kuti panosvika gore ra2024, mabrands anozoona kudzikiswa kamwe kamwe mumashandisirwo emari ne30% nekumisikidzwa kwehunyanzvi hwekushandisa otomatiki uye nzira dzakagadzirwazve.
Pakutanga, hyper-automation yanga isiri iyo inozivikanwa, asi chirwere chekorona chakasundira kubvumidzwa kweiyi tekinoroji iri kubuda uko AI neML matekinoroji anoomesa akati wandei emabhizinesi mabasa uye anoita seakakura madhiraivha.
Kwete, iyi tekinoroji haina kungogumira pamabasa anosanganiswa ne robotic process automation. Muchokwadi, iri danho rekutanga kuenda mukuitwa kweiyi mhando tekinoroji mhinduro. Chokwadi, ML neAI zvakakosha zvikamu zveiyo hyper-otomatiki.
Kuti uwane kushanda musangano, hyper-otomatiki maitiro uye maturusi haagone kuvimba nechero software mhinduro; vanofanira kunge vaive nekwaniso yekugadzirisa mamiriro ekuchinja uye kupindura kumamiriro asingafungidzike.
Kushandiswa kweML yeCybersecurity Applications
Iko kushandiswa kwemuchina kudzidza uye ayo maalgorithms anoramba achiwedzera kune akawanda maindasitiri, uye imwe yeakadai maindasitiri ari cybersecurity kunyorera. Kubva pane antivirus software yekurwisa cyber-mhosva kune zvityisidziro zvisati zvaitika, muchina kudzidza kunopa akawanda mafomu kune ino chaiyo indasitiri.
AI neML vari kubatsira masangano uye mabrandari kuwedzeredza yavo yekufambisa nzira uye nekuvandudza mashandiro ehumwe matekinoroji akabatana senge hombe data, AI, uye kufungidzira kuongororwa. Inofungidzirwa kuti kushandiswa kweAI neML mune dura rekuchengetedzeka kuchakurumidza kupfuura $ 38.2 bhiriyoni kubudikidza 2026.
Cybersecurity ine yakawanda yedhata poindi, uye AI inojekesa, kugadzirisa, uye kuifirita neepamberi algorithms nepo ML pano ichiongorora iyo yapfuura data uye inouya nemhinduro dzinogona kushandiswa mune ramangwana. Kubva pane iyo yapfuura data, iyo system ichapa mazano pane akasiyana mapatani ekudzivirira kutyisidzira uye malware.
FinTech kutanga uye mabhengi masisitimu anoshandisa ML tekinoroji iyo inowedzera akawanda materu kumasystem avo, kuona kutyisidzira, uye kugadzirisa mabasa akaoma. Pamwe chete neizvi, kudzidza kwemuchina kunogona zvakare kushandiswa kudzora kutyora uye kubvumidza zvigadzirwa kuti zvipindure kune cyber-kurwisa pasina rubatsiro rwevanhu.
Ml yeKushanda Kunobudirira
Kushambadzira masimba anoramba achichinja nezvinodiwa nevatengi uye hunyanzvi mumatekinoroji. Kana mabhizinesi achida kurarama mumakete-akakwikwidzana pamusika, vanofanirwa kutora zvinoenderera mberi zvekushambadzira senge zvemagariro midhiya, SEO, yakasarudzika email nzira dzekutengesa, uye zvimwe zvakawanda.
Even Elluminatiinc.com akataura kuti akasarudzika emaimeri ekushambadzira nzira dzinogadzira mikana yekutengesa uye inosimudzira kuvepo kwebhizinesi uku uchigadzira mhedzisiro. Asi kune nzira dzakawanda dzekutengesa; zvave kuomera vatengesi kuti vatore iyo uye voita kuti online kuvepo kwakasimba.
Nekudaro, zvaizove nyore kwazvo kuvashambadzi kugadzira marongero ebhizinesi kana vakamboongorora maitiro emushandisi uye mapatani. Kuziva izvo zvinoshandiswa nemushandisi, kudzidza kwemuchina kunogona kushandiswa kuchera dhata uye nekuuya nemhinduro dzinounza mhedzisiro.
Muchidimbu, kutorwa kwemichina yekudzidza michina kunobatsira nhandare yekushambadzira uye kubatsira vashambadziri kuti vaenderere zvakanyanya nevatengi sezvazvaive zvisati zvamboitika.
Kubvumirana kweMuchina Kudzidza uye IoT
Iyo Internet yezvinhu, inonzi IoT, tekinoroji iyo isisiri muchikamu chevacheche. Iyo tekinoroji yakavandudzwa inogadza kubatana pakati pezvimwe zvishandiso nemidziyo kunetiweki. Nhasi, bhizinesi renyika riri kusangana zvakasiyana IoT mhedzisiro izvo zvisina kumbofungidzirwa kare. Chimwe nechimwe cheizvi kubatana chinokwanisa kudyidzana. Kugamuchirwa kweIoT kuri kuwedzera pane mamwe maindasitiri, uye pane mikana yekuti panosvika 2025, anopfuura makumi matanhatu emabhiriyoni maIoT michina ichave iriko.
Chinangwa chikuru chemidziyo iyi yakabatana ndechekuunganidza ruzivo runogona kuongororwa uye kugadziriswa kuita sarudzo dzakajeka. Pano muchina kudzidza unoratidza kuve unoshanda zvakanyanya sezvo uchikwanisa kushandiswa kushandura iyo data yakaunganidzwa kubva kune akasiyana madhivhisi kuita ane chinangwa, anokwanisa kuita mhedzisiro.
Semuenzaniso, mukati meyakagadziriswa maindasitiri, IoT network kutenderera nzvimbo inogona kuunganidza data rekushanda pamwe nekuita, iro rinozoongororwa neAI masisitimu ekuvandudza nekukwirisa kugona kwekugadzira, kusimudzira kushanda, uye kufungidzira kuti michina ichada kugadziriswa.
Ramangwana reML: Icho Chiri Chete Kutanga
Yakapinda mune gumi idzva, isu tinotarisira kuti kumisikidzwa kwenzira dzekudzidza muchina kunokanganisa maindasitiri akasiyana siyana. Makambani akati wandei akatobatanidza kudzidza kwemuchina mune avo bhizinesi maitiro, uye izvi zvimiro zvinofungidzirwa kukura zvakanyanya mumakore anotevera.
AI / ML kuitisa kunobatsira sangano zvakanyanya kana ikatora mukana weazvino kutsvagisa uye maitiro ekuvandudza nekushandisa inotevera inotevera mhinduro.
Brijesh Vadukiya inyanzvi mukugadzira uye blogger anofarira. Chandinonyanya kushushikana nacho kudzidzisa vanhu vanofarira tekinoroji. Ini ndine shungu dzekubatsira vanhu mune zvese zvikamu zveSawaS mhinduro, online kuburitsa bhizinesi, digital advertising uye mimwe misoro inoenderana iyo inoita kuti nyika yemangwana ive nani. Ndiri kufarira kunyora zvinobatsira uye zvinodzidzisa zvemukati zvinobatsira mabhurandi kukura bhizinesi.
10 Mashini Kudzidza Matekinoroji Iwe Iwe Usingazive Use
Dai 23 | Machine Learning
Kwayaka: Yemahara Photo | Mukadzi anobata smart technology holographic interface ...
3 Mhando dzeMuchina Kudzidza uye Zvavanoshandiswa
Dai 22 | Machine Learning
Nyika ikozvino yakazara nehungwaru hwekunyepedzera. Kudzidza kwemuchina kunotamba imwe heki yebasa mairi. Vazhinji ...
8 Yakasarudzika Nzira Mashini Kudzidza Kuchafambira Mberi Iyo Ed-Tekinoroji Chikamu Mu2021
Dai 9 | Machine Learning, tekinoroji mune dzidzo
Machine Kudzidza uye Artificial Intelligence zviri kukonzera kusagadzikana mukusaverengeka ...